Etcher: iyo app iwe yaunoda kunyora anoshanda masystem eako Raspberry Pi pane SD | Mahara emahara
Etcher: iyo app iwe yaunoda kunyora anoshanda masisitimu eako Raspberry Pi pane SD
Paunotenga imwe yeshanduro dze Raspberry Pi bhodhi, chimwe chezvinhu zvaunofanirwa kuita kugadzirira SD memory kadhi kuitira kuti riine bootable inoshanda sisitimu inoenderana neiyi SBC bhodhi. Kuti izvo zvikwanisike kune maturusi mazhinji, kunyange chimwe chezvinyanyo kufarirwa uye chandinokurudzira chiri Etcher kana balenaEtcher. Nayo iwe unenge uine zvese zvaunoda kuti ugadzirire OS yako mu SD mune yakajeka uye inokurumidza nzira.
Iwe unofanirwa kuziva kuti kune hombe nhamba ye anoshanda masisitimu ayo akatotsigirwa pamwe neRaspberry Pi bhodhi. Mazhinji ekugoverwa kweGNU / Linux atove maARM-anoenderana uye anogona kushanda nemazvo paPi. Iwe zvakare une mamwe akavhurwa sosi anoshanda masisitimu ayo asiri akavakirwa paLinux kernel uye akakosha kune iyo Raspberry Pi, senge RISC OS, RaspBSD, nezvimwe. Unogona kunyange kutsvaga zvimwe zvekushandisa senge Windows IoT, OpenELEC yekumisikidza media media, RetroPi yemitambo yeRetro, nezvimwe.
2 Chii chinonzi Etcher?
3 Matanho ekushandisa balenaEtcher
Zvakanaka, chero sisitimu yekushandisa yaunosarudza, uye kunyangwe akati wandei pane imwechete SD, lkana zvaunofanira kuita yako Raspberry Pi kumhanya ndeiyi:
Dhawunirodha yako sisitimu yekushandisa. Mune iyi link ndakusiira iwe vakuru ve Raspberry Pi Foundation, asi kune zvimwe zvakawanda mune mamwe manyuko.
Dhawunirodha balenaEtcher kubva ku zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti.
Isa balenaEtcher pane yako system.
Shandisa Etcher kupfuudza yako OS mufananidzo kukadhi re SD saka unogona bhuti kubva kuPi.
Ehezve, kune izvo iwe unoda PC ine muverengi wekadhi, iyo SD pachayo (mune iyo Raspberry Pi ichave iri microSD) uye iyo SBC bhodhi.
Chii chinonzi Etcher?
Balena akagadzira iyi software inozivikanwa se Etcher. Kunyangwe iri riri iro zita raanozivikanwa naro, zvinofanirwa kutaurwa kuti yakadaidzwa iyo pakutanga. Asi yakapihwa zita muna 2018 apo resin.io yakachinja zita rayo kuti balena.io.
Iyo yemahara uye yakavhurika sosi chirongwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi. Kujaira nyora mafaera emifananidzo kune vezvenhau kuchengetedza. Iwo anowanzo kuve mifananidzo eanoshanda masisitimu senge ISO kana IMG uye midhiya anoshandiswa anowanzo kuve SD ndangariro makadhi, kunyange iwo zvakare anotsigira USB flash memory. Ndokunge, iwe haugone kuishandisa chete kune SDs yeRaspi yako, asiwo kugadzira Live Live, gadzirira iyo Windows 10 yekumisikidza yepakati, nezvimwe.
Uye zvakare, iyo software yemultiplatform, nekuti inogona kushanda ese ari maviri masystem anoshanda eMicrosoft Windows, Apple macOS uye zvakare GNU / Linux.
Pakati pake features inonyanya kuzivikanwa ndeiyi:
Rwoga kuona nhau pane iyo iwe yaunosimudzira iyo inoshanda system mufananidzo. Iwe unotoziva kuti vanogona kuve ndangariro dzeUSB kana makadhi eSD awakaisa mumidziyo.
Inodzivirira pakurwisa hard drive. Ndokunge, haufanire kunetseka semamwe mapurogiramu nezvekukanganisa uye kusarudza yako hard drive uye kuitakura ...
Ita zvese maitiro acho otomatiki yakambotanga, pasina iwe kupindira. Zvakare, kana iwe uchida kugadzira makopi akati wandei pane akasiyana midhiya, semuenzaniso yekirasi ine akati wandei maSBC, kana yekutanga yapera inobvumidza iwe kuita zvakafanana maitiro nekukurumidza.
Mune ramangwana, vagadziri vanodawo kuwedzera rutsigiro rwekuenderana kweiyo kuenderera kuchengetedza. Ndokunge, kuti paunogadzira svikiro ine GNU / Linux distro, unogona kusevha shanduko dzakaitwa kune iyo SD kana USB. Izvo zvinogadzira chikamu kana nzvimbo pakati panochengetwa zvese. Pakati pese, mamwe mapurogiramu anotowirirana neizvi anotendera iwe kuti usarudze saizi yechikamu icho.
Matanho ekushandisa balenaEtcher
Zvino zvaunoziva ruzivo rwe software iyi, ngatione matanho ekuishandisa. Iwe uchaona kuti zviri nyore kwazvo:
download balenaetcher muchinyorwa chaunoda:
ZveWindows: une sarudzo mbiri, imwe ndiyo .exe yekumisikidza pane yako system. Imwe yacho inotakurika iyo iwe yausingade kuisa, iwe unoirodha pasi, unzip uye iwe unogona kuimhanya yakananga.
ZveMacOS: Pane imwechete sarudzo, Apple system inoitisa yaunokwanisa kuisa nyore.
YeLinux: senge pamusoro, pane zvakare imwe chete sarudzo. Iyo yepasirese AppImage mhando package, saka iyo yekumisikidza inoshanda kune chero kugovera uye inoitwa nyore. Iwe unofanirwa kungoimhanyisa uye maitiro acho anotanga.
Ino ndiyo nguva yeku isai. Kuti uite izvi, mhanyisa pasuru yesarudzo yako. Kunze kweiyo inotakurika iyo isingade iyo, sezvandambotaura. Kana kuiswa kwapera kwapera unogona kutanga.
Mhanya neapp balenaEtcher kuitsvaga pakati pemapurogiramu anowanikwa eOS yako.
Iyo graphical interface iri nyore kwazvo. Haina kurasikirwa. Unongofanira kuita nhanho nhatu:
Sarudza mufananidzo kutanga. Kubva pane iyo browser yefaira iwe unogona kuenda iko uko iyo mufananidzo weiyo sisitimu yekushandisa yawakasarudza yakatorwa pasi: .iso kana .img.
Nhanho inotevera ndeyekusarudza iyo SD kadhi kana USB flash drive kwaunoda kuti iite.
Wobva wabata kupenya, ndiko kuti, kuteedzera uye kugadzirira svikiro rakasarudzwa nehurongwa hwawakashandisa kuitira kuti rigone kubviswa.
Mirira kuti maitiro apedze uyezve, kana usiri kuzoteedzera zvinopfuura imwe svikiro, unogona kubuda.
Mushure maizvozvo uchava vakagadzirira nzira dzekuyedza pakombuta kana paRaspberry yako Pi….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Etcher: iyo app iwe yaunoda kunyora anoshanda masisitimu eako Raspberry Pi pane SD
John Charles Fischer akadaro
Mune iyi link https://www.balena.io/etcher/ iripi vhezheni yeRaspberry?
Pindura Juan Carlos Fischer
Gyroscope: zvese zvaunoda kuti uzive
ATtiny85: microcontroller inopa yakawanda yekutamba ...